UKhuzani ubuya ngesigqi sakhe esidala kwi-abhamu
UKHUZANI uthi ukujabulele ukukhipha i-albhamu yakhe yeshumi ezophuma ngoLwesihlanu Isithombe: SIGCINIWE
NOKUBONGWA PHENYANE | November 28, 2019
UMCULI kamaskandi uKhuzani Mpungose uthi kuye kusho lukhulu ukukhipha i-albhamu yeshumi ekubeni naye ebehlanganisa iminyaka eyishumi kuwo lo nyaka afika kule ndima.
NgoLwesihlanu abalandeli balo mculi bakubheke ngabomvu ukuphuma kwe-albhamu ethi Inhloko Nes’xhanti.
Le albhamu ilama amanye le nsizwa yaseNkandla eyazakhela ngawo udumo okukhona kuwo ethi Injemnyama, Isixaxa Samaxoki, Inhlinini Yoxolo namanye.
“Ngibonga uJehova okunguyena ohambe nami kule ndlela njengoba emculweni kungelula futhi kungewona wonke umculi ofika ngegiya eliphezulu aze aqede iminyaka eyishumi esayibambe kanjalo. Ngeke-ke ngibakhohlwe nabalandeli bami, izinduna abantu engisebenza nabo, ukube bebengekho bekungeke kwenzeke konke lokhu engikubonile okuhle kimi endimeni yomculo,” kuchaza uKhuzani.
Uthe kule albhamu entsha abantu abazoyithola ngalo uLwesihlanu usebenze nabantu abasha kulo mkhakha okukhona kubo uLuve Dubazana nentokazi uSiphesihle Zulu yaseMpangeni.
“Le albhamu inezingoma ezingu-14, kodwa engingangabazi ukuthi abantu bazoyijabulela engunombolo 13 ethi Ngiyavuma, nonombolo 7, 2 no-9 othi Sengingangawe. Ngibuyele emuva esigqini engafika ngaso emculweni nabantu abazosizwa ezingomeni ezahlukene. Bengifuna ukubakhumbuza ukuthi ngisuka kuphi. Abantu ekade ngaqala ukusebenza nabo okukhona kubo uThibela Mpungose, Thuthani Ndlovu, Maqhude Mkhize, Madoda Ntshingila, Phathatha Ngcobo, J.J Mbuthuma, Skhindi zondi, noFalabo Khuzwayo nabo bakhona kule albamu njengoba benze izinto ezahlukene.”
Uthe lezi zingoma ezintsha abantu bazoqala ukuzizwa emicimbini ehlukene azobonakala enandisa kuyo njengoba kuzoqala uDisemba.
Ngonyaka ozayo uthe isifiso sakhe esikhulu wukuqopha ama-video ezingoma zakhe ezathandwa ngabantu ukuze abalandeli bakhe bazijabulele sezihlangene.
“Ngiyabonga kubaba uShobeni Khuzwayo wenkampani Izingane Zoma, okunguye owavula izandla ngaqopha e-studio sabo, ngila ngikhona nje kungenxa yakhe. Nabezindaba ngeke ngibashiye ngaphandle badlale enkulu indima emculweni wami.”
Uveze ukuthi le albhamu izobe itholakala KwaMai Mai, eGoli naseThekwini eWorkshop.